नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपालका रामनामी कम्युनिस्टहरु !
नेपालका रामनामी कम्युनिस्टहरु !
भारतमा अयोध्यामा राममन्दिर निर्माणको संकल्प गरेर जनमत बटुली हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीले अपार सफलता पाएपछि आफ्नो सिद्धान्त र कर्मको मोर्चामा असफल भएका अनेक नेताहरु सनातन हिन्दु जनताको धार्मिक आस्थाको संवेदनालाई छोएर-चलाएर-खेलाएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्।
उहिलेउहिले हिन्दुहरुको आस्थामाथी ठेस पुर्‍याउने र हिन्दु धर्मका मूल्यमान्यताको उपहास गर्दै हिड्नेहरु अचेल सनातन हिन्दुहरुप्रति प्रेम र सहानुभूति राखेको नाटक गर्न लागिरहेका छन्।
दक्षिण एशियाका केही उदाहरण:-
-पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक हिन्दुहरुलाई मताधिकार थिएन । दुई ओटा आरक्षित कोटामा मत दिएरै चित्त बुझाउनु पर्थ्यो। हिन्दु धर्मका पूजा र मेलाहरु खुला रुपमा गर्न पाइँदैन थियो। तर नवाज शरिफ र इमरान खानले आफूलाई उदार देखाउन होली खेले, दीपावली मनाए, हिन्दु पर्वका अवसरमा
कार्यक्रम गर्न लगाएर भाषण गरे। बलात्कृत महिलाले आफूलाई बलात्कार गर्ने पुरुषले माया गरेको ठानेर म्वाइँ खाएजस्तो हिन्दुहरुले मक्ख पर्दै कहिले नवाजलाई भोट दिए कहिले इम्रानलाई भोट दिए।
-बंग्लादेशका हिन्दुहरुको कथा पनि पाकिस्तानका हिन्दुहरुको जस्तै हो। अवामी लिगकी शेष हसिनाले हिन्दुहरुको १ करोड भोटको जीतहारमा ठूलो अर्थ हुने देखेर एक दुई ओटा हिन्दु मन्दिरको जिर्णोद्वार गरि दिइन्। होली र दीपावली मनाएर हिन्दुहरुलाई मक्ख पारिन्। तिनै हिन्दुहरुको भोटले लगातार तीन ओटा चुनाव जितिरहन शेष हसिनालाई सघाउ पुग्यो।
-भुटानमा हिन्दुहरुले सरकारी विद्यालयमा आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाउन्नन् । राजाको अनुमतिबिना आफूले चाहेको ठाउँमा मन्दिर बनाउन पाउन्नन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो जातीय पोशाक लगाउन पाइन्न। तर विगत केही वर्षदेखि सरकारले मन्दिर बनाइदिएर, पुजारीलाई सरकारी कोषबाट तलब दिएर, राजाले दशैंमा टीका लगाइदिएर अनि नेताहरुले नेपाली भाषामा भाषण गरेर हिन्दुहरुलाई फकाइरहेका छन्।
-भारतमा नेहरुले अन्य सबै धर्मालम्बीलाई धार्मिक संस्था र धार्मिक पाठशाला खोल्ने र सरकारी अनुदान पाउने अधिकार दिएको थियो। हिन्दु धर्मका संस्था र पाठशालाहरु सात दशकसम्म सरकारी सहयोगबाट बञ्चित थिए। तर उही नेहरुको पारसी धर्मालम्बी नाति राहुल ग्यान्डी "म जनैधारी ब्राह्मण हुँ" भन्दै मन्दिरमन्दिर धाएर फोटोसुट गरिरहेको छ।
-नेपालमा "धर्म अफीम हो" भनी पढाइने स्कुलका शिक्षक ओलीज्यूले जीवनभर हिन्दु धर्मका मूल्यमान्यताको उपहास गरेर पढाइरहे । तर अचेल राम नेपालमा जन्मेका हुन् भन्दै, रामजन्मभूमिमा मन्दिर बनाउँछु भन्दै र पशुपतिमा स्वर्ण झालर चढाएर हिन्दुहरुको सहानुभूति बटुल्न खोज्दै छन्।
-"हिन्दु धर्मका पुस्तक चलाउनु पर्छ, हिन्दुका मन्दिर भत्काउनु पर्छ, ब्राह्मण-क्षत्रीका जनै चुडाल्नु पर्छ भन्दै जीवनभर उग्रता देखाउँदै आएका प्रचण्ड पनि अचेल कतै भैंसी पूजा गर्न लागेको देखिन्छन् त कतै छालाको जुत्ता लगाएर होम गरिरहेको देखिन्छन् । हिजोआज रामको नाम भजाएर ओलीज्यूले जस्तै हिन्दुहरुलाई लरक्क पार्ने ध्याउन्नमा लागेका हुन्।
-तर यति कुरा बुझ्नु पर्छ कि भारतमा भाजपा र मोदी एकछिन मन्दिरमा गएर घन्ट हल्लाएर अनि हिन्दुको भेलामा गएर एकछिन भाषण गरेको भरमा सफल भएका हैनन् । हिन्दुत्वप्रतिको निष्ठा, चरित्र तथा आचरणमा प्रतिबद्ध र हिन्दु मान्यता अनुसारका राजनीतिक-सामाजिक कार्यक्रम ल्याएर सफल भएका हुन्।
-दक्षिण एशियामा सनातनी हिन्दुका दिन त फर्केका छन् तर बाघ र बाघको छाला ओढेको स्याललाई चिन्न सकिएन भने फेरि घात हुने निश्चित छ ।